Xildhibaan Dhahar oo ka digay carqaladayn uu sheegay in wasaaradda waxbarashada DFS ay ku hayso Puntland – Kalfadhi
Gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiillada Puntland Xildhibaan Cali Axmed Saalax (Dhahar) ayaa walaac ka muujiyay habka ay wasaaradda waxbarashada DFS u wajahday waxbarashada Puntland, bilihii u dambeeyay.
Xildhibaan Cali oo hadal ka jeediyay shaacinta imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland wuxuu sheegay in warar bishii May ka soo baxay wasaaradda waxbarashada DFS ah ay carqalad ku yihiin waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee deggan Puntland.
“Waxyaabihii nagaga imanayay dowladda federaalka ah siiba wasiirka wasaaradda, waxaanu ka xunnahay in ay carqalad ku noqdaan meeshii keliya ee Soomaaliya ay ka dhisnayd waxbarashadu oo ah Puntland” ayuu yiri Cali.
Khilaafka waxbarashada ee Puntland iyo dowladda federaalka ah ayaa salka ku hayay in wasaaradda waxbarashada DFS ay qaado imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland taas oo ay Puntland ka biyo diiday.
Wasiirka waxbarashada Federaalka Xildh. Cabdullahi Goodax Barre oo arrintaas ka jawaabay go’aanka Puntland wuxuu waalidiinta u jeediyay in ay muuqato hubanti la’aan ku wajahan ardaydooda imtixaanka ku gelaya deeganadan, taas oo khilaafka biyo kulul ku sii shubtay.
Xildhibaan Cali wuxuu shirka ka sheegay in Puntland ay madaxda sare ee dowladda federaalka ah kala hadashay arrintaas balse ay weli arrintu taagan tahay. Xildhibaanka ayaa intaas ku daray in mar labaad ay xasuusinayaan in madaxda DFS ay doorkooda qaataan si la isugu soo dhowaado.
“Meelihii la rabay in la dhiiri-geliyo hadii carqalad lagu noqdo, taas waxay dhaawacaysaa wada-shaqayntii iyo sidii ay Soomaaliya isugu soo dhowaan lahayd” ayuu yiri. Wuxuu xildhibaanku u jeediyay xukuumadda Puntland in ay doorkeeda ka qaadato arrintan.